Elman oo loo xaqiijiyey Horyaalnimada Somaaliya. - Caasimada Online
Home Warar Elman oo loo xaqiijiyey Horyaalnimada Somaaliya.
Elman oo loo xaqiijiyey Horyaalnimada Somaaliya.
Kooxda Elman ayaa xaqiijisay Horyaalnimada dalkeena Somaaliya ka dib markii ay garaacday galabta kooxda Banaadir Sports Club ciyaar ka dhacday garoonka Jaamacadaha ee Magaalada Mogdishu.
Elman ayaa horaan u muuqatay kooxda ugu awooda badan horyaalka, iyadoo keliya hal guul darro la kulantay, waxaana loo xaqiijiyey horyaalka iyadoo ay kulamo ka dhiman yihiin.
Kubad soo jiidasho leh oo ay galabta kusoo bandhigeen garoonka Jaamcadaha ayaa u xaqiijisay inay noqdaan horyaalnimada sanadkaan.
Iyadoo kooxda kaalinta labaad ku jirta LLPP Jenyo ay ka sareyso dhibco gaaraya 10 dhibcood.
Dhanka kale Kooxda Badbaado ayaa xaqiijisay booskeeda heerka labaad.
Sida ay u kala sareeyaan kooxuhu:
KOOXDA Ciyaartay Guul Bareejo La garaacay FG DH
Elman FC 12 9 2 1 18 29
LLPP Jeenyo 11 4 7 0 7 19
Heegan 11 5 4 2 4 19
Banadir S Club 12 3 6 3 3 15
Dekadaha 11 3 4 4 -2 13
Saxafi FC 11 2 5 4 -3 11
Horseed 11 2 5 4 -4 11
Badbaado 11 0 1 10 -23 1
Elman ayaa xaqiijisatay Horyaalkoodii labaad oo isku xiga ka dib markii ay galabta 2-1 ugu awood sheegatay kooxda Banaadir, waxaana goolka looga hor maray Elman iyadoo uu ka dhilyey ciyaarta oo mareysa daqiiqadii afaraad ciyaarayahan Nuur Cabdi Xuseen [Nuur Dhagool], waxaase ka beeniyey oo goolka barbaraha Elman u dhaliyey Cabadullahi Yuusuf Cismaan, sidaas ayaana lagu kala nastay.
Markii la isku soo laabtay ayaa ciyaartu sii dhanaanaatay, iyadoo labada koox ay wada qeybsanayeen ciyaar ku dhisan weerar iyo weerar celis waxaana goolka guusha Laad xor ah Elman ugu dhaliyey Sacad Saalax Xuseen. Sidaas ayeyna Elman ku qaaday Horyaalkii 37aad ee Somaaliya.